Tilmaamaha Bilowga ah ee laga Soodhaafay Sida Loo Isticmaalayo Google Analytics
Google wuxuu bixiyaa hab bilaash ah oo sahlan oo lagu qiyaaso waxqabadka boggaga internetka oo lagu hagaajiyo waxyaabaha ku dhacaya. Iyada oo la adeegsanayo Google Analytics, mulkiilayaasha bogagga ayaa hadda wax ka qaban kara martida, hawlahooda halka ay ku jiraan goobta, xaddiga waqtiga ay ku nool yihiin mawduuca, cusbooneysiinta shuruudaha raadinta ee muhiimka ah, iyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo ku saabsan websiteka. Igor Gamanenko, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Mareeyaha Guud ee Macaamiisha, wuxuu soo bandhigayaa aragtiyo gaar ah oo ku saabsan barashada gaarka ah ee loogu talagalay in lagu baro bilowga hababka isticmaalka Google Analytics si loo hagaajiyo waxqabadkooda goobta
Waxbarashada Google Analytics
Tababarka waxaa ka mid ah talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida qofku u rakibi karo koodhka raadinta ee Google Analytics, iyo sida loo isticmaalo macluumaadka dashboard. Isticmaalkeeda, dadka isticmaala waxay fahmayaan cidda ay booqashadoodu yihiin, iyo sidoo kale inay helaan macluumaad kale sida bogga booqashada, bog kasta oo booqasho ah, celceliska muddada wakhtiga la joogayo booqashada qiimaha xaraashka, iwm. Macluumaadkan ayaa muhiim u ah qof kasta oo ka shaqeeya Google Analytics markii ugu horeysay - ddos protected vps usa.
Waxbarashada Google Analytics: Goolasha Goobta Goobidda
Marka uu kobcayo ama abuurayo website cusub, mulkiiluhu wuxuu badiyaa ujeedooyin gaar ah u leeyahay inuu gaaro dhammaadka wax soo saar. Waa sababta ay ujirta ujeedka muhiimka u tahay inay u ogolaato milkiilaha inuu ogaado ilaa inta ay gaadheen si uu u fuliyo ujeedooyinkooda ama inta ay wali socoto. Waxyaabo kale oo muhiim ah oo la xidhiidha raadinta bartilmaameedka ayaa ah ogaanshaha meesha ay isticmaalaan dadka ka caawiyay in ay gaaraan bartilmaameedyadaas ay ka yimaadeen, maadaama ay gacan ka geysanayso horumarinta xeeladaha mustaqbalka..Tababbarka, waxaa jira shuruudo gaar ah sida cayaarta saxda ah, ciyaarta madaxa, iyo cayaaraha joogtada ah, kaas oo ah isticmaalaha cusub ee u baahan inuu barto inuu si fiican u qalabeeyo aqoonta sida loo isticmaalo boggaga internetka
Waxbarashada Google Analytics: Dhacdooyinka raadraaca
Google Analytics wuxuu ka caawiyaa milkiilayaasha boggaga in ay ka faa'iideystaan ​​geeddi-socodka ka socda goobta. Haddii ay tahay liis gareysiinta liiska boostada, ama gujinta batoonka lagu ciyaaro qaar ka mid ah warbaahinta, kuwani waa dhacdooyinka ay fuliyaan martida waxayna muhiim u yihiin guusha goobta. Habka ay dhacdooyinka u dhacaan waxay u sheegaan milkiilaha haddii wargeyska ay bixiyaan waa mid qiimo leh ama aan ahayn. Waxa kale oo ay ku wargelineysaa dadka isticmaala macaamiisha inay ka helaan wax ka badan kuwa kale. Milkiilayaasha ganacsigu waxay ogaan karaan sida loo bartilmaameedsado dareenka macaamiisha si ay u sii wataan dhacdooyinkooda.
Raadinta Xiriirada Kala baxsan Isticmaalka Google Analytics
Xidhiidhada ka baxsani waa kuwo dabiici ah in ay leeyihiin website kasta. Suurtogal maahan in hal goob keliya ay ku noolaan karaan oo kaliya bogga internetka. Websaydhku ma noqon karaan jasiirado maaddaama ay u baahan yihiin ilaha si ay u helaan aqoonsi ama dhisaan taraafikada. Sidaa darteed, boggaga internetka, waxay ubaahan yahiin goobaha ay wadaagaan ama meelaha kale ee ay ka heli karaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si ay u helaan kalsoonida. Isugeynta xiriirka ka baxsan waxay website ka dhigeysaa mid sumcad leh, saaxiibtinimo leh, iyo inta ugu badan, kalsooni.
Raadinta Kumbuyuutarka Goobta Google Analytics
Waxaa macquul ah in goobtu ay ka dhigto dhagaystayaasheeda bartilmaameedka ah oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waxa dadku diidi karaan waa sida loo qiimeeyo heerka isticmaalka isticmaale ee waqtiga. Tababarka wuxuu ka caawiyaa dajinta ujeedooyinka shabakada shakhsiyeed, kaas oo ka caawinaya go'aaminaya xaddiga ay ka kooban tahay bogga uu ka kooban yahay martida.